Imithetho neMigangatho yeBhola ye-7
Imidlalo yePhuphu yamanzi: 7-Ibhola
Iibhola ezi-7 zeBhola Ezi zinto zikhethwa kakhulu kwiMidlalo yePhulo
Imidlalo yePhulo ngokuzonwabisa Ukuzonwabisa kunye ne "Ibhola ezisixhenxe". Ifoto (c) Matt Sherman 2007, ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Ibhola e sixhenxe ingaba yinye yemidlalo yebhola elishisayo kakhulu kwihlabathi kwiminyaka elishumi ezayo. Umdlali ophakathi okwazi ukuqhuba kuphela enye okanye amabini ama- racks angu- 40 edlalwa ibhola angadlala ngokudlala ibhola le-7. Kukho nje iibhola ezimbalwa etafileni ezinokuthi zingene kwiimeko ezinzima.
Ndiyathanda ibhola le-7 njengomdlalo wokuqeqesha, kuquka nemigaqo endiyifumene yona, ukukhuthaza ukuxinwa kunye nokucwangciswa kwangaphambili. Ibhola le-7 ihamba ngokukhawuleza, kumnandi kwaye ngamanye amaxesha ukhetho olukhuphayo phakathi kwazo zonke imidlalo yebhola ngaphandle!
I-Billiards yeBhola eyi-7. Ifoto (c) Matt Sherman 2007, ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Ukuhlawula iibhilidi zeebhola zilandelwe enye ukuya kwi sixhenxe, kwaye enye iya phambili kunye ne-maroon ephakathi njengoko ichazwe ngasentla.
Qalisa umdlalo ngekhefu elivulekile. Ibhola yomdlalo kufuneka ibetha ibhola lokuqala kuqala ngexesha lokuphuka. Smash iibhola zikhuni kwaye ubanike i-whirl.
Dlala impumelelo njengeminye ibhola yebhola yokujikeleza njengeBhola yeNtsuku (ukudubula kwibhola ephantsi kwaye emva kokubetha, ukuba nayiphi ibhola ngaphandle kwebhokisi lebhola lebhola lakho liyaqhubeka) kodwa ngemithetho emine eyongezelelekileyo emininzi:
1) Ipokheji yebhola ye-7 kufuneka ibe yinto yokutshulwa kwefowuni ukuze iphumelele (ivakaliswe ngaphambi kokubetha) njenge "ibhola le-7 kwikona elisezantsi!"
2) Umdlali ngamnye unikwe omnye (1) obizwa ngokuba ngumkhuseleko (isilonda sokuzikhusela ngokuzikhethela, umdlalo odlalwa ukusikhumbula, ngokuqhelekileyo) ngomdlalo ngamnye.
3) Ukhuseleko kunye nepokothini inokubhengezwa kwibhola le-7 ukuze kuqhutywe isifo esifanayo. Ngokomzekelo, "ibhola le-7 kwicala elifanelekileyo nekhuseleko!" Ngamanye amagama, unokuba uzama ukuphumelela kodwa ukuba uyaphuthelwa, uye wachaza umtshini okhuselayo ekuboneni kwangaphambili, ukuze umdlali wakho angayifumani ibhola ngesandla.
4) Nayiphina ipempe engayithumeli ibhola kwisikhwama ivelisa ibhola ngesandla. Naliphi na ukuphoswa kuthathwa njenge-scratch kwibhola ye-8 okanye ibhola le- 9 . Ukungaphuthelwa kokunye kuthetha ukuba umdlali ongenayo unokuphumelela ngokukhawuleza. Uxinzelelo olunzulu lufunwa kuwe! Uninzi lwabaqalayo ndifundise uthando lwebhola le-7 lo mbandela woqeqesho lomdlalo.
Ibhola le-7 ngumdlalo ohamba ngokukhawuleza. Umthetho wesi-2 ungaguquleka kumdlalo wokukhubazeka , omnye umdlali unikwe enye ukhuseleko kunye nabadlali ababini, abathathu okanye ngaphezulu. Iimpawu zokhuselo ezongeziweyo zinciphisa umdlalo kodwa zivumela abadlali bamazinga ahlukeneyo amakhono ukuba bancintisane ngokulinganayo.
I-7-Ball Pool Defense
Umzobo 1 Ubonisa i-Pool Cool. Ifoto (c) Matt Sherman 2007, ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Cinga ngo-Rule 4 ngo-7-Ibhola lebhola, njengokuphosakeka kunokuphelisa umdlalo ngokukhawuleza. Ibhola-ngakwesokunene kuyo nayiphi na imfuno epholileyo, kungekhona isigxina-ntliziyo, ukhuseleko .
Gwema ukuba ngumdlali wokuqala ukusebenzisa ukhuseleko lwabo kuphela! Cinga ngohlobo loMfanekiso 1 .
Ukuba umdlalo webhubhu wawunebhola le- 9 , unokushiya isikhundla esiboniswe ngokuzithemba. Enye yeendlela ezikhethileyo kumdlali ochasayo kule ndawo kukukubuyisela ibhanki elungileyo emva kokulahlekelwa ibhola le-5. Umdlalo wakho olandelayo? Ukhuseleko lwe sibini ukuba unganeliseki ngebhanki entsha yebhanki kwibhola le-5.
Kodwa kwibhola le-7, kufuneka u- pocket ibhola le-5 (okanye enye ibhola) okanye umdlali wakho ufumana ibhola-esandleni. Baya kuthi ba khusele emva kokukwenza, kwaye awufumani esinye ukhuseleko ... xa unqabile ibhanki akushiya, bayibamba ibhola lokuqhayisa kwaye bawine.
Zama ukulondoloza ukhuseleko lwakho lwesibini ekhuselekile kumdlalo emva kokuba zabo zihambe. Qhagamshelana ngokukhuselekileyo kuqala xa uqinisekile ukuba baya kuphinda bafumane ithuba lokugqiba umdlalo kwizame zabo ezizayo.
Ukusetyenziswa kweBhola ye-7
Umzobo we-2 ubeka i-Pool Best Billiards Pool. Ifoto (c) Matt Sherman 2007, ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Esikhundleni somfanekiso wesi-2 , ugcine ukhuseleko lwakho ludutshulwa kwiibhilidi zeebhilidi ezingasetyenziswanga kude kube ngoku, ngasekupheleni komdlalo. Ngomthetho 3 memeza ngebhola le-7 ekhoneni elifanelekileyo lekhonkco kwaye ukhuseleko!
Yenza umdlalo uze uphumelele umdlalo-kodwa ukuba uphoswa ibhola le-7, umdlali wakho uyamkela indawo engenayo ngaphandle kwebhola. Ndiye ndafundisa le mdlalo kaninzi amaxesha kunye nabaqalayo bayalibala kwindawo ethile yokubiza umnqweno kwi-7 yokugqibela ibhola aze alahleke, xa ndimele ndizame ukudubula okubuhlungu ngaphandle kwebhola elingenanto.
Izibalo ze-NHL kunye nee-Acronyms
Ngaba kukho i-Standard-wide Length Length for Clubs Golf?
Ukuchaza i-Skull (okanye i-Skulled Shot) eGoli
Inkonzo kunye nokubuyiselwa
Umgca weMidlalo yeGalati
Iingxoxo zokuqala: Zizisa ngesiNgesi
I-Sima de los Huesos (iSpain) - I-Lower Paleolithic Sierra de Atapuerca
AmaHlathi aphezulu kakhulu kwihlabathi kwilizwe ngalinye
'Ngaba Iintsapho Zami Ziyingozi?' Iingcamango eziMnandi malunga neMindeni
I-Top 10 ye-World Competitive Eaters
Imigaqo yokuSungula iMithombo yeeonic
Imfazwe YaseMerika: iMandla Jikelele yakwaWilliam S. S. Rosecrans
I-Iraqi Yokufa Kuphantsi koSaddam Hussein
Ukusinda kwi-Infancy kwi-Middle Ages